Gam akporo Auto, nke a bụ onye inyeaka kachasị mma maka ụgbọ ala | Gam akporosis
N'oge ọzọ anyị kọọrọla gị android Car, ma ọ bụ ihe na-abụ otu ihe ahụ, ndị kasị mma android nnyemaaka maka ọkwọ ụgbọala, onye nnyemaaka ga-eme ka anyị nwee ike isoro gam akporo anyị na-emekọ ihe na nchekwa zuru oke mgbe anyị nọ na wiil nke ụgbọ ala anyị.
N'isiokwu na-esonụ, m ga-agwa gị banyere akụkọ a nwere ngwa inyeaka ngwa ngwa bụ nke bụ njikwa njikwa zuru oke yana kọmputa zuru ezu maka ụgbọ ala anyị, na ihe niile a kpam kpam n'efu, dị ka Google ji anyị na ya pụrụ iche ngwa.
1 Gịnị bụ gam akporo Auto
2 Ihe niile gam akporo Auto na-enye anyị
3 Otu esi amata ma ugbo m nwere gam akporo Auto
4 Niile mobiles dakọtara na gam akporo Auto?
5 Otu esi eji gam akporo Auto
6 Enwere ike iji gam akporo Auto jiri eriri?
7 Ngwa kachasị mma maka gam akporo Auto
8 Etu esi lelee vidiyo na gam akporo Auto
9 Okwu nkịtị na gam akporo Auto
9.1 Anaghị ejikọta
9.2 Akwadoghi ngwa
10 Dị na-enyeworị gam akporo Auto
11 Download Android Auto maka n'efu na Playlọ Ahịa Google
Gịnị bụ gam akporo Auto
Gam akporo Auto bụ ngwa anyị nwere ike ibudata na ekwentị, ma ọ na-arụkwa ọrụ dị ka interface maka ugbo ala ejikọtara. Enwere ike iwere ya dị ka ndọtị nke sistemụ arụmọrụ nke anyị smartphones, mana iji ya na ụgbọ ala. Ọ na-ewe ụfọdụ ihe gam akporo iji dozie ojiji ya maka ụgbọ ala.
N'ihi nke a, anyị nwere ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ. Anyị nwere ike ịge egwu, jiri ụzọ ma ọ bụ igodo na Google Maps, kpọọ otu n'ime kọntaktị anyị ma ọ bụ zipụ ozi na WhatsApp na-ekwu na anyị na-anya ụgbọ ala. Ọ na-enye ohere iji ụgbọ ala ka mma, ekele maka ọrụ ndị a.
Ihe niile gam akporo Auto na-enye anyị
Gam akporo Auto na-enye anyị ohere nke inwe kọmputa na kọmputa, kpamkpam n'efu, nke anyị na-emekọ ihe na nchekwa zuru oke mgbe anyị na-akwọ ụgbọala, nke ahụ bụ na naanị ijikọ ngwaọrụ anyị na ụgbọ ala anyị site na Bluetooth, ngwa gam akporo Auto ga-agba ọsọ na-akpaghị aka iji nye anyị echiche dị iche banyere ọdụ gam akporo anyị ma tinye ngwaọrụ ndị bụ isi anyị na-ejikarị eme ihe mgbe anyị nọ na ntanetị nke ụgbọ ala anyị.
N'ihi ya, mgbe na-agba ọsọ Android Auto anyị na-ahụ ihe interface na-emegharị ka edozi ya na ngụkọta ala, tumadi na iji olu anyị na iwu Google dị mma, ọ bụ ezie na ọ nwekwara nnukwu bọtịnụ maka mgbe ọ bụ ikpe na anyị ga-eji aka anyị na-emekọrịta ihe na gam akporo anyị.
Gam akporo Auto interface nwere anọ ngalaba dị iche iche ma ọ bụ ihe ngebichi nke isi omume ma ọ bụ mkpa ndị ọkwọ ụgbọala jikọtara ọnụ mgbe anyị nọ na njikwa nke ụgbọala anyị:
Pmmalite ihuenyo Ebe ozi di nkpa banyere ozi, nkwuputa di nkpa, oku emere na nso nso a, egosiputa egwu ugbu a, onodu ubochi, ozi n’okporo uzo di n’uzo anyi no.
Igodo nsoroụzọ site na nke anyị na-enweta ngwa ngwa na Google Maps ebe egosipụtara ọnọdụ ugbu a na anyị nwere ike ịkọwa ebe njedebe ngwa ngwa.
Ihuenyo ekwentị site na ebe anyị nwere ike inweta log log, ịkpọ oku na ọbụlagodi ozi olu.
Ihuenyo playback site na ebe anyị na-achịkwa egwu anyị na-ege n'ụgbọala ahụ, dakọtara na ngwa Podcast, Google Play Music, ndị egwuregwu mgbasa ozi dịka VLC ma ugbu a dakọtara na Telegram, Plus Messenger, Telegram X na ndị ahịa Telegram ndị ọzọ ka ha kpọọ si Kpọmkwem music na anyị ebudatara site esiwanye-ewu ewu nzi ozi ngwa ngwa. Anyị ga-ahazi egwu a site na ndepụta yana aha nke ọwa ma ọ bụ otu ndị a na-ahụ egwu egwu ebudatara n'ụzọ anụ ahụ.
Isi omume nke gam akporo Auto bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na o nwere ike ịmekọrịta na ngwa ahụ na-enweghị iji aka gị, nke a ga-ekwe omume n'ihi ya mmekorita zuru oke na Google Assistant, a dị nnọọ irè ma na-akpali akpali nnyemaaka karịa Google Ugbu a na nke gị na ya na-akparịta ụka aghọwo ihe na-atọ ụtọ, na-atọ ụtọ ma karịa ihe niile.
N'etiti ntọala bụ isi nke ngwa ahụ anyị na-ahụ dị iche iche ma ọ bụ arụmọrụ dị ka ihe na-atọ ụtọ ma baa uru dị ka ndị m ga-edepụta n'okpuru:
Nhọrọ igbochi WiFi njikọ mgbe ejiri gam akporo Auto jikọọ.
Arụ ọrụ jikwaa jikọọ ụgbọala.
Ntọala ntọala iji mee ka iwu olu Google dị mma.
Banye na ntọala Google Assistant.
Ọrụ ịgbanwe akpaka azịza, nke a ga-eziga na aka nke bọtịnụ mgbe ịnata ozi ma ọ bụ oku na-abata.
Arụ Ọrụ rụọ ọrụ notma Ọkwa na nnukwu sere n'elu kaadị.
Nhọrọ iji hazie mmalite mmalite nke ngwa mgbe ị na-ejikọ na ngwaọrụ Bluetooth ọ bụlaỌ dị mkpa ịhọrọ Bluetooth nke ụgbọ ala anyị ka ngwa ahụ wee malite na akpaghị aka mgbe ijikọ ya.
Nhọrọ iji rụọ ọrụ Bluetooth na-akpaghị aka mgbe ịmalitere ngwa ahụ.
Nhọrọ iji debe ihuenyo mgbe niile.
Na vidiyo nke m hapụrụ gị n'aka nri nke mbido akwụkwọ a, ma e wezụga ikwu maka ọrụ ndị a niile gam akporo Auto na-enye ndị ọkwọ ụgbọala niile, kwa M na-egosi gị otu esi ahazi mmalite mmalite nke ngwa ahụ mgbe ị na-ejikọ Bluetooth nke ụgbọ ala anyị, nakwa ụzọ isi dozie ụfọdụ nsogbu ndị anyị nwerekarị na anyị na-ezute, dị ka ngwa ahụ anaghị amalite na akpaghị aka, na nhazi nke sistemụ gam akporo anyị na-emechi ngwa ahụ, wdg, wdg. Ya mere, ana m akwado ka ị lee vidiyo ahụ anya ebe ọ ga-aba uru
Otu esi amata ma ugbo m nwere gam akporo Auto
Gam akporo Auto malitere ịmalite na 2016. Ya mere, ụgbọ ala site na afọ ahụ na ọhụụ nwere ike inwe ndakọrịta a, dabere na ika ahụ. Enwere ndị nrụpụta na-arụ ọrụ na Google na nke a, karia. Ihe nkịtị bụ na lelee na ebe nrụọrụ weebụ na-emepụta ma ọ bụ na weebụsaịtị gam akporo Auto, ebe ọ na-egosi ma ọ bụrụ na ụgbọ ala ịnwere dakọtara. Ha na-ejikarị data a edebe ndepụta ahụ.
Ndepụta nke ndị na-emepụta amụbaala nke ọma na oge. E nwere ọtụtụ ụdị ndị ọzọ nwere ụgbọ ala nwere ndakọrịta. Maka ndị ọrụ nwere ụgbọ ala tupu 2016, ọ bụ ihe dị mma na ha enweghị gam akporo Auto, mana nwere ike ịzụta redio ndị dakọtara iji ha n'ime ụgbọ ala ma nwee ohere iji ya.
Ndị na-emepụta ihe ndị a na-akwado ugbu a bụ Abarth, Acura, Alfa Romeo, Audi, Bentley, Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Dodge, Fiat, Ford, GMC, Genesis, Holden, Honda, Hyundai, Infiniti, Jaguar Land Rover, Jeep, Kia, Lamborghini, Lexus, Lincoln , Mahindra na Mahindra, Maserati, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, RAM, Renault, SEAT, Škoda, SsangYong, Subaru, Suzuki, Tata Motors Cars, Toyota, Volkswagen na Volvo. N'ihi ya, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ụdị nwere gam akporo Auto.
Niile mobiles dakọtara na gam akporo Auto?
N'ihe banyere gam akporo gam akporo, enweghi ọtụtụ ihe achọrọ iji zute. Ihe niile achọrọ ugbu a bụ ka ekwentị nwee ụdị hà nhata ma ọ bụ karịa karịa Android 5.0 Lollipop. Ọ bụrụhaala na ị rube isi na nke a, ị ga - enwe ike ịnweta ngwa ahụ na ama gị ma jikọọ ya na ụgbọ ala.
Ka oge na-aga, dị ka nsụgharị ọhụrụ nke gam akporo si abịa, chọrọ nwere ike gbanwee na-arịọ ka nwere ọzọ na-adịbeghị anya nsụgharị. Ma ugbu a, Android Lollipop bụ nke kacha nta mbipute iji nwee ike iji ya.
Otu esi eji gam akporo Auto
Ekele maka gam akporo Auto anyị nwere ike ịnweta ngwa ndị a (chee banyere Google Maps ma ọ bụ Spotify) na ekwentị ma ọ bụ na ihuenyo dakọtara nke ụgbọ ala ahụ, n'ụdị ndị ahụ nwere ya. Ozugbo ebudatara ngwa ahụ na ekwentị, dị na Google Play, mgbe ahụ anyị nwere ike ịmalite. Havekwesịrị ijikọ ekwentị na ụgbọ ala, ma ọ bụ eriri ma ọ bụ Bluetooth, ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume.
Ya mere, naanị ị ga-emepe ngwa ịchọrọ iji n'oge ahụ. Ọ bụrụ na ihe ịchọrọ bụ ịnwe ike ịnyagharịa iji Google Maps, naanị ị ga-emepe ngwa ahụ. Otu uru dị ugbu a bụ na anyị nwere ike iji ọtụtụ olu mee ọtụtụ ihe ndị a site na iji Google Assistant. Ya mere, anyị nwere ike ijikwa ngwa ndị a na-ejighị aka anyị.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịkpọ oku, ịnyagharịa Google Maps ma ọ bụ mepee Spotify, anyị nwere ike ime ya n'ụzọ dị mfe site na iwu olu, ọkacha mma mgbe ị na-anya ụgbọala. Ya mere, ọ bụ ezigbo nhọrọ ị ga-eburu n'uche, nke ga-eme ka ị ghara ịdọpụ uche mgbe ị na-anya ụgbọala.
Enwere ike iji gam akporo Auto jiri eriri?
E nwere ohere iji gam akporo Auto na-enweghị eriri, ijikọ ekwentị na ụgbọ ala site na Bluetooth. Ọ bụ ezie na nhọrọ a pere mpe, ebe ọ bụ na ọ bụghị ụgbọ ala niile nwere nhọrọ Bluetooth a ịmalite. Na mgbakwunye, ọ bụ ọrụ enyerela ndị ọrụ na mba ole na ole. Ọ bụ ezie na a na-atụ anya ịgbasa, ọnụnọ ya pere mpe maka ugbu a.
Ọ bụ ya mere, O yikarịrị ka ịnweghị ohere a, dabere na obodo gịN'oge a, mana n'ọtụtụ mba dịka United States, ị ga-enwe ohere iji ya na-ejighi eriri n'oge niile.
Ngwa kachasị mma maka gam akporo Auto
Gam akporo Auto bụ ihe ị nwere ike iji mee ọtụtụ ihe n'ime ụgbọ ala. Ya mere, enwere ụfọdụ ngwa ndị nwere ike ịmasịkarị, n'ihi na ha ga-enye ọrụ ndị ọzọ ga-enye ohere iji ka mma mgbe niile. Ihe ngwa maka gam akporo Auto anyị nwere ike ibudata?
Spotify: The music gụgharia ngwa bụ otu n'ime ihe ndị dị mkpa na nke a. I nwere ike na-ege ntị ọtụtụ nde songs mgbe ụgbọala mfe. Yabụ, njem gị ga-adị mfe nnagide n'oge niile.
WhatsApp: Ikike iji zipu ozi na kọntaktị gị site na iwu olu, na-eji Google nnyemaaka, bụ nnọọ uru na nke a. Na mgbakwunye, iji ngwa ahụ na gam akporo Auto ị nwere ike ịmepụta ozi nzaghachi akpaka n'oge ọ bụla.
Podcast Go: You nwere ike ịnwere ike ige ntị na pọdkastị na ekwentị gị. Ngwa a, nke dakọtara na Android Auto, na-enye anyị ike ige ha ntị mgbe ha na-anya ụgbọala. Na mgbakwunye, ọ bụ ngwa nke nwere interface dị mfe iji.
Stlọ Gas na Spain: Otu ngwa nke n’enweghị mgbagha ọ bụla dị mkpa maka ndị na-eme njem ọtụtụ na Spain. Ekele dịrị na ngwa a anyị nwere ozi gbasara ebe enwere ọdụ ụgbọ ala dị anyị nso, na mgbakwunye na inye anyị ọnụahịa mmanụ ụgbọala. Ka anyị wee nwee ike ịchọta nke dị ọnụ ala maka anyị.
Lee: Ngwa igodo nke na-apụta maka inwe usoro ọrụ ndị ọzọ nwere nnukwu mmasị. Anyị nwere data oge na-aga n'okporo ụzọ, ihe mberede ma ọ bụ ọnụnọ nke rada, n'ihi obodo ndị ọrụ na-ekere òkè na ya. N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike ịhọrọ ụzọ anyị ka mma dabere na steeti okporo ụzọ.
Etu esi lelee vidiyo na gam akporo Auto
Obere ihe karịrị otu afọ ọ ga-ekwe omume ilele vidiyo na gam akporo Auto. Nke a bụ ihe ga-ekwe omume ekele na ngwa YouTube Auto (Car Stream), nke bụ nsụgharị nke ngwa a ma ama nke dabara adaba maka iji ụgbọ ala. Iji mee nke a, anyị ga-eme ọtụtụ ihe.
Nke mbu bu rụọ ọrụ gam akporo Auto Developer Mode. Nke a bụ ihe anyị rụzuru site na ịpị ọtụtụ oge na Ozi gbasara gam akporo Auto, n'ime ntọala. Yabụ mgbe ahụ anyị ga-abanye na Unknown Origins ma rụọ ọrụ ya. Ọzọ ị ga-etinye YouTubeAuto APK, a njikọ.
Ozugbo ebudatara, naanị jikọọ ekwentị na ụgbọ ala wee họrọ vidiyo na ị chọrọ ịhụ. N'ụzọ dị otú a ọ ga-ekwe omume ịme ya n'enweghị ọtụtụ nsogbu.
Okwu nkịtị na gam akporo Auto
Ojiji nke gam akporo Auto bụ ihe dị mfe n'ozuzu, ọ bụ ezie na ọ bụ ihe nkịtị ka nsogbu bilie dị nnọọ ihe mgbe anyị na-eji ya. Ya mere, o yikarịrị ka oge ụfọdụ ị ga-ahụ otu n'ime mmejọ ndị a, mana ihe ngwọta ya na-adịkarị mfe.
A nkịtị ọdịda bụ na ọ dịghị jikọọ. Nke a bụ ihe nwere ike ịbụ nsogbu na ekwentị, n'ọtụtụ ọnọdụ n'ihi na emelitebeghị ngwa ahụ. Ya mere, ọ dị mma ịlele na ọ bụghị ihe sitere na ngwanrọ ahụ, dị ka nke na-enweghị mmelite. N'aka nke ọzọ, ọ dịkwa mma ịlele na ọ bụghị ihe sitere na eriri.
Ihe nkịtị bụ na ọ bụ ihe nke ngwanrọ, nke n'ọtụtụ ọnọdụ na-edozi na mmelite nke ngwa ahụ. Nakwa Ọ bụkarị maka Bluetooth nke ụfọdụ ọdịda, ma ị ga-ejikwa eriri jikọọ ya n'enweghị nsogbu.
Nke a bụ nsogbu anyị na-eche ihu oge niile. Enwere ọtụtụ ngwa na-adabaghị na gam akporo Auto. Ọ bụ ezie na ndị mmepe arụ ọrụ ọtụtụ ihe na nke a, a ga-enwe oge mgbe ụfọdụ ngwa agaghị arụ ọrụ. Ihe nkịtị bụ na anyị maara n'ọdịnihu ma ọ bụrụ na nke a bụ ikpe ma ọ bụ na ọ bụghị.
Ọ bụ ezie na enwere oge mgbe anyị na-ebudata ngwa yana ọ naghị arụ ọrụ nke ọma na gam akporo Auto. Ọ nwere ike nwaa oge ibudata ngwa, iji nwalee ma ọ dị otu a. Ọ bụ ezie na o yikarịrị ka ọ bụghị mgbe niile ka ọ na-arụpụta. Yabụ ị ga-achọ ụzọ ọzọ n'echiche ahụ.
Dị na-enyeworị gam akporo Auto
Ndepụta ndị nrụpụta ugbu a na-enye gam akporo Auto abawanyela nke ukwuu. More na ndị ọzọ ụgbọ ala ụdị na-enye ohere a. Na mgbakwunye, ọtụtụ n'ime ndị nrụpụta kachasị mkpa abanyela na ndepụta a n'afọ ndị gara aga.
Ndị a bụ ndị nrụpụta ụgbọ ala niile ha na-akwado gam akporo Auto: Abarth, Acura, Alfa Romeo, Audi, Bentley, Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Dodge, Fiat, Ford, GMC, Genesis, Holden, Honda, Hyundai, Infiniti, Jaguar Land Rover, Jeep, Kia, Lamborghini, Lexus, Lincoln, Mahindra na Mahindra, Maserati, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, RAM, Renault, SEAT, Škoda, SsangYong, Subaru, Suzuki, Tata Motors Cars, Toyota, Volkswagen na Volvo.
Okwesighi ka ewepu ya na ka ọnwa na-agafe a ga-agbakwunye ụdị ọhụrụ na ndepụta a. Ebe ọ bụ na a ka nwere ọtụtụ ndị na-anaghị enye anyị nkwado dị otu a, mana ọ ga-atọ ụtọ ma ọ bụrụ na ha enye ya. Ma, anyị ga-echere oge tupu nke a eme.
Download Android Auto maka n'efu na Playlọ Ahịa Google
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Nanị gam akporo Auto !!, Nke a bụ onye inyeaka kachasị mma maka ụgbọ ala, ntọala na akụkọ